माओवादीले सरकार छाड्नुपर्छ : गगन थापा - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
माओवादीले सरकार छाड्नुपर्छ : गगन थापा
२०७४ असोज १९ बिहीवार
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापासँग सरोजराज अधिकारीले गरेको संवाद
बृहत् वाम एकतालाई कसरी लिनुभएको छ?
नामै त वाम एकता। नाम वाम, विचार वाम भएपछि त्यो एकता एकदमै अस्वाभाविक होइन। असम्भव पनि होइन तर हाम्रो सन्दर्भमा यो आवश्यक होइन।
संविधान निर्माण पछाडिको सकारात्मक पहल भनेको नेपालमा वाम पार्टीहरुको लोकतान्त्रिक एकीकरण हो। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा वाम पार्टीहरुको लोकतान्त्रिक एकीकरण अरु लोकतान्त्रिक पार्टी जस्तै भएर आयो र त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीति स्थापित हुन्छ भन्ने जुन धारणा बनेको छ, त्यसलाई चाहिँ यो ठूलो च्यालेन्ज हो।
अब त वाम पार्टीहरुको नामै फेरिएला, आधारभूत विचारहरु फेरिएलान् भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। संसारलाई देखाइदिने गरी वाम पार्टी बनाउँछौं भन्ने जुन कुरा भयो, वाम पार्टीहरुको एकता र त्यस बेला व्यक्त यस्ता विचारले त ‘मोर लेफ्ट’बाट ‘मोर डेमोक्र्याटाइज’ भएर जाने देखिन्छ।
चुनाव चिह्न एउटै सम्मका कुरा छन्। बाबुराम पनि जोडिएका छन्। यसरी हेर्दा आसन्न चुनावमा तात्कालीन स्वार्थ देखिन्छ।
माओवादी र कांग्रेसको छलफल चलिरहेको छ। प्रदेश नम्बर २ मा कुराकानी मिलेन भन्ने छ। प्रतिशतका कुराहरु छन्। त्यो एलायन्सपछि त बाबुरामजीको पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरु वैकल्पिक धार बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल चलाइराख्नुभएको छ।
यिनीहरुको एकता सैद्धान्तिक मिलन हो कि दीर्घकालीन? या आसन्न चुनाव लक्षित?
अहिले हेर्दा त टोटल्ली आसन्न चुनावकै लागि देखिन्छ। नेकपा एमालेमा जसरी भए पनि यो चुनावमा बहुमत ल्याउने सोच छ। तर, प्रदेश नम्बर २ को चुनावपछि आँकलनमा त्यो सम्भव नभएपछि यो अवस्था आएको हो। माओवादी केन्द्रले पनि अब आउने चुनावमा अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था देखेपछि कोही न कोहीसँग एलायन्स गर्नुपर्ने अवस्था देख्यो। एमालेतिरबाट लाभ पाउने अवस्था देखेपछि वाम एकताको कुरा बाहिर आएको हो।
यो मिलन एकदमै आसन्न चुनावका लागि हो र आफ्नो निजी स्वार्थसँग जोडिएको मिलन हो।
सत्ता गठबन्धन एउटासँग अनि प्रमुख प्रतिपक्षसँग चुनावी समीकरण गर्न सैद्धान्तिक रुपमा पाइन्छ?
पाइँदैन। हामीकहाँ प्रि-इलेक्सन एलायन्स अनि पोस्ट-इलेक्सन एलायन्सको न्यूनतम धर्म हुन्छ। न्यूनतम त माओवादीले सरकार छाड्नुपर्ने हो पहिला। सरकार छाडेर हामी टेक्निकल्ली रुपमा सपोर्ट गर्छौं अब हामी छैनौं, भन्न सक्नुपर्छ। बाहिर आएर हामी यसकारण सरकारलाई समर्थन गर्छौं भन्नुपर्थ्यो।
यो गठबन्धन बनाउने बेलामा त कागज भएको छ नि। यो त गठबन्धनको न्यूनतम धर्म पनि पालना भएन।
आफ्नो सत्ता साझेदारलाई रोक्न नसक्नु त कांग्रेसकै कमजोरी भएन र?
हामीसँग साझेदारीमा बसिरहेको पार्टी नै अबदेखि पार्टी अफिस बन्द गर्छौं, पार्टी नै विलय गर्छौं, हामीलाई राजनीति नै गर्नु छैन भन्यो भने के गर्ने? हो, त्यसलाई रोक्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा पनि कमजोरी भए होलान्।
माओवादी र एमालेको एकताको कुरा बाहिर जे देखिएको छ, त्यो मात्र पनि होइन। थुप्रै कुरा मिसिएका छन्। थुप्रै कारण छन्।
सैद्धान्तिक कारणले पनि वाम एकता भनेको नेपालको लोकतन्त्रलाई खतरा हो। त्यो रोक्न नेपाली कांग्रेस एमाले र माओवादीलाई मिल्न नदिन चाहन्थ्यो। त्यसका लागि हरमग्दुर प्रयत्न गरेकै हो।
भरतपुरको घटनालाई व्यक्तिगत घटना मात्र मानिएको छ, तर त्यति मात्र होइन। त्यो प्रयत्नको ‘एक्स्ट्रिम केस’ हो। सबैखाले प्रयत्न गर्ने र त्यो प्रयत्नबाट माओवादी र एमालेलाई एक हुन नदिने। यसरी वाम एकता हुन नदिने भन्ने सवालमा त हामी असफल भइहाल्यौं नि। कहाँनिर भन्दा चुनावको नजिकै आएर। हाम्रो नेतृत्व, जोसँग सबै कुराको सूचना थियो, नियन्त्रणका विषय थिए त्यो सन्दर्भमा त हामी नराम्रोसँग चुक्यौं नि।
उनीहरुले हामीलाई छोडेर गए, धोका दिए भन्ने कुराको अर्थ भएन। राजनीतिमा यसले अर्थ राख्दैन। यो चुनावमा त हामी एमाले र माओवादीको एकता हुन दिन चाहँदैन थियौं। सम्भव भएमा हामी माओवादीसँग मिलेर यो चुनाव लड्न चाहन्थ्यौं। त्यो भएन भने निर्वाचनपछि पनि माओवादीसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्थ्यौं।
यो गठबन्धनलाई त १० वर्षसम्मको गठबन्धन भनेर बाहिर प्रचार गरियो तर दुई महिनासम्म पनि टिकेन नि?
एउटा त हाम्रो व्यवस्थापन र रणनीतिक चातुर्यका कुरा होलान्। अर्को, प्रदेश २ मा कांग्रेस-माओवादी मिलेर चुनाव लडेको भए २५-३० प्रतिशतको अफर गरेर मिलाएको भए यो गठबन्धन बन्दैन थियो।
त्यसो भए के माओवादीले कांग्रेसलाई दुरुपयोग गरेको हो?
हामीले सरकारका लागि गठबन्धन बनायौं। त्यसमा पनि हाम्रो स्वार्थ थियो। त्यसो नगरेको भए चुनाव सम्भव नै थिएन भन्ने थियो। एमाले-माओवादी गठबन्धन ब्रेक गर्न चाहन्थ्यौं हामी। हामीले चुनावसम्म माओवादीलाई लिएर जाने हो, त्यसपछि चाहिँ विश्वास छैन भनेर तयारी अवस्थामा रहनुपर्थ्यो। हामी त सके माओवादीसँग मिलेर चुनावमा जाने हो भन्ने नै थियो।
प्रचण्डले जसरी सत्ता हस्तान्तरण गर्दिए। त्यो भएकाले माओवादीप्रति कांग्रेसको आत्मविश्वास उच्च भएको हो?
हामी त प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट आएका हौं, छापामार शैली होइन हाम्रो। एमाले र माओवादी मिल्छन् भन्ने त नेतृत्व तहमा पनि एकरति विश्वास थिएन। एक हिसाबले मिलाएर चुनाव लड्छौं र हामी सँगसँगै रहन्छौं भन्नेसम्म थियो। यसमा एकदमै कन्फिडेन्स थियो।
यो एकता आन्तरिक मामिला मात्रै पनि हो कि वाह्य कारण पनि छ?
यसमा घटनाहरु बिस्तारै उजागर हुँदै जालान्। अहिले जसरी बाहिर आएको छ, यो हेर्दै गर्दा आन्तरिक कारणले मात्र होइन कि भन्ने लाग्छ। कुनै पार्टी फुट्ने र मिल्ने कुरा हाम्रा कारणले मात्र हुँदैन भनेर निष्कर्ष निकालिहाल्नु छिटो हुन्छ। तर यसले स्पेस चाहिँ दियो।
प्रमुख प्रतिपक्षीसँगै सत्ता साझेदारले तालमेल गर्नु त आन्तरिक कारण मात्रै त होइन होला नि?
जुन स्तर र गतिमा यो सबै भयो, चुनावसँग जोडिएको विषय मात्र हो त? भन्ने पनि देखिन्छ। हामीसँग गठबन्धनमा बसिराख्दै गर्दा यही गठबन्धनलाई पराजित गराउन अर्को गठबन्धन बनाउने बारे त दुई-चार दिनमै छलफल भएन होला!
बुढीगण्डकी आयोजनाको विरोधमा बाबुरामजीले अभियान चलाउनुभयो। चीन त्यसको पछाडि थियो। गठबन्धनमा बाबुरामलाई पनि ल्याइएको छ। हिजो सुतिरहेको भनिएको ड्रयागन उठेर आएको हो कि?
छिमेकी देशहरुलाई नेपालभित्रको घटनामा तान्ने कुरामा भनिहाल्न हतारो हुन्छ। यसका लागि कि त सूचना हुनुपर्‍यो, या त आधार। करिब-करिब असम्भव जस्तो देखिन्छ अहिलेको एलायन्स। बाबुराम र प्रचण्ड एक ठाउँमा आउने कुरा असम्भव भन्दा पनि चटकी पाराजस्तो लाग्छ।
अहिले त वाह्य हस्तक्षेप ‘ओपन सेक्रेट’ छ। यसरी उनीहरु आन्तरिक रुपमै मिलेका होलान् र?
व्यक्तिगत सम्बन्ध वा पार्टीगत सम्बन्धका हिसाबले मात्र होइन। दुइटै अहिले प्रतिपक्षमा बसेर कांग्रेस एक्लैले पेलेर सरकार चलाउला र अर्कोचोटि झन् पेल्ला भन्ने डरले आएको भए प्राकृतिक हुन्थ्यो। एउटासँग सरकारको गठबन्धनमा बसिरहेको छ, फेरि सरकार बनाउने योजना बनिरहेको बेला अचानक यस्तो एकताको कुरा आउनुलाई के हामी-हामी मात्र बसेर भयो त? स्ट्राइकर कसले चलायो? भन्ने प्रश्न त रह्यो।
नेपाल लाईभ अन्लाईन बाट लिएको